आँटिला नेता- विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ७, २०७५ शीतल कोइराला
काठमाडौँ — सात सालको क्रान्तिका एक योद्धा रहे पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल राजनीतिक पहिचान २०१७ अघि थिएन । त्यतिबेला उनको राजनीतिक यात्राको कुरा गर्दा आफ्ना दाजु बीपी सँगसँगै सम्झिनुपर्ने हुन्थ्यो । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कू गरेपछि नख्खु जेलमा कोइरालाको लामो बसाइ भयो ।
त्यसपछि मात्र राजनीतिमा उनको व्यक्तित्व देखिन थालेको हो । अनशन गरेर उनी कारागारमुक्त भएका थिए । लगत्तै उनले राजा महेन्द्रसँग भेटघाट पाए । त्यसपछि उनी बीपीको रिहाइमा सक्रिय भए । यो कार्यले उनमा विशिष्टता थपिन गयो र नेपाली राजनीतिमा उनको व्यक्तित्व स्थापित हुन थाल्यो ।
बीपी कारागार मुक्त भए । यसमा कोइरालाकै भूमिका थियो । पछि उनीहरू सबै निर्वासन (भारत) मा जान बाध्य पारिए । कोइरालाले विहारको फारविसगन्जलाई केन्द्र बनाई पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कुनै न कुनै प्रकारले आन्दोलन गरिनै रहे ।
२९ असार २०३० मा विराटनगरबाट एउटा विमान अपहरण भएर फारविसगन्ज पुग्यो । यसको कथा विभिन्न व्यक्तिले आ–आफ्नो ढंगले भनिरहेका छन्, स्वीकारेका छन् । तर त्यसमा कोइराला नै मुख्य योजनाकार थिए । विमान अपहरण प्रकरणले कोइरालालाई नेपाली राजनीतिमा अझै बलियोसँग स्थापित हुन ठूलो सहयोग गर्‍यो ।
२०३१ सालमा कांग्रेसद्वारा सञ्चालित सशस्त्र संघर्षका लागि विमान अपहरणले साधनस्रोत जुटायो । पूर्वी जिल्लाहरू कब्जा गरी स्थानीय सरकार गठन गर्दै कांग्रेस अगाडि बढिरहेको थियो । त्यही क्रममा ओखलढुंगामा धडपकड गर्दा कमाण्डर यज्ञबहादुर थापा लगायत योद्धाले सहादत प्राप्त गरे ।
विमान अपहरण र २०३१ सालको सशस्त्र संघर्षमा कोइरालाको केन्द्रीय र निर्णायक भूमिका थियो । यस घटनाबाट उनी नेपाली राजनीतिमा निर्णय गर्नसक्ने आँटिलो व्यक्तिको रूपमा राम्ररी चिनिए । यही स्वभावले उनलाई पछि उच्चकोटीको राजनेता बनायो ।
बीपी कारागार मुक्त भएपछि जनमत संग्रहको घोषणा भयो । त्यससँगै कोइरालाले देशभित्र दह्रोसँग राजनीतिमा केन्द्रित हुने अवसर पाए । यस अघि नै कांग्रेस पुनर्गठन भैसकेको थियो । बीपीले उनलाई महामन्क्रीमा नियुत्त गरे । यसबाट उनले संगठन गर्ने प्रशस्त मौका पाए । उनको नेतृत्व गतिशील थियो ।
उनमा संगठन गर्ने विशिष्टता पनि थियो । व्यापक देशदौडाहा गरे उनले । संगठन भनेको निश्चित लक्ष्यका लागि बढीभन्दा बढी मानिसहरू जुटाउनु हो । यसको एउटै तरिका हुन्छ— कार्यकर्ता, समर्थक, साथी लगायत आम जनतासँग बढीभन्दा बढी तादात्म्य राख्नु, सबैसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु, उनीहरूको दैनिक सरोकारका विषयमा भाग लिनु । कोइरालाले यी सबै काम गरे । संगठनको विश्वविख्यात मान्यतालाई स्वीकार गरेर उनले कार्यकर्तामाझ लोकप्रियता पाउँदै गए ।
कोइराला राजनीतिक प्राणी थिए । काम नपाएपछि उनी बेचैन हुन्थे । केही न केहीनगरी बस्नै सक्दैनथे । छत्तीस सालदेखि तउनी लगातार नेपालभर हिँडिनै रहे, अनित्यसलाई ठोस राजनीतिक रूप दिने काममापनि क्रियाशील भइरहे ।
२०४६ सालपछि कोइराला राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा उदाए । जनआन्दोलन पश्चात सफलतापूर्वक संविधान लेखाए पनि आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएपछि कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछिका दिनमा नेपालको राजनीति उनकै सेरोफेरोमा घुमिरह्यो ।
२०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गरेपछि त्यस विरुद्धको आन्दोलनको उनी सर्वोच्च कमाण्डर थिए । माओवादी हिंसालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण र संविधानसभा मार्फत व्यापक राजनीतिक परिवर्तन उनले नेतृत्व गरेको त्यो आन्दोलनको परिणाम थियो ।
कोइरालाको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र योगदान बाह्रबुँदे समझदारी हो । त्यस ऐतिहासिक घडीमा उनी नभएका भए देशले यो मोड सायद लिने थिएन । एकात्मकबाट संघीयता, राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट गणतन्त्र अनि नयाँ विशेषतासहित विविधतापूर्ण समावेशी पहिचान बनाउँदै नेपाल जसरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, त्यसको आधार बाह्रबुँदे समझदारी हो, जुन कोइरालाको व्यक्तित्वको अभावमा सम्भव थिएन । युग परिवर्तनको नायकको रूपमा कांग्रेसले मात्र होइन, सिंगो देशले नै उनलाई कालान्तरसम्म सम्झिरहनेछ ।
दीर्घ राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वले गर्दा माओवादी उनको शरणमा परेका थिए । त्यो बेला उनको सामुन्ने जनयुद्ध लडेका पुष्पकमल दाहालमात्र होइन, समकालीन राजनीतिका अरु नेता पनि फुच्चे लाग्थे । दाहाललाई जनयुद्धको अँध्यारो सुरुङबाट निकाल्न उनै कोइरालाले सहारा दिए ।
प्रक्रियाभन्दा परिणामको खोजी गर्नु कोइरालाको राजनीतिक चरित्र थियो । फलस्वरुप निरंकुश बनेका राजालाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न बाध्यमात्र पारेनन्, सँगसँगै दलहरूले तय गरेको मार्गचित्र अनुसार आगामी दिनमा अघि बढ्न राजी भएको कबोल पनि गराए ।
राजाको त्यो कबोल नै पछि शान्तिपूर्ण रूपमा देशमा गणतन्त्र स्थापित गर्ने आधार बन्यो । उनैले संविधानसभा मार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा माओवादी हिंसाको अन्त्य र राजतन्त्रको समाप्तिसँगै सिंगै देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए ।
विवाद माथिको व्यक्तित्व
कोइराला पनि मानवोचित क्रुटिबाट मुत्त थिएनन् । उनको राजनीतिक जीवन पनि पक्कै विवादरहित रहेन । यहाँ के स्मरणीय छ भने विश्वका कुनै पनि राजनीतिज्ञ विवादमुक्त रहनसकेको इतिहास छैन । भारतमै पनि महात्मा गान्धीबारे आज पनि विवाद देखिन्छ ।
विवाद जीवन्तताको अर्को नाम हो । जसले काम गर्छ, उसका बारेमा टिप्पणी हुन्छन् । कोइरालाले काम गर्ने र निर्णय लिने साहस देखाए । उनको निरन्तरको सक्रियता जीवनको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । कहिल्यै हार नखाने उनको स्वभाव थियो । जीवनका आखिरी दिनहरूमा उनले गरेको निर्णायक र ऐतिहासिक कामले उनको विगतमा देखिएको अभाव र कमजोरीलाई पूर्णतः गौण बनाइदियो ।
लेखक कोइरालाका सञ्चार सहयोगी थिए ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:०६
ककरा हाथ कनक पिचकारी !
चैत्र ७, २०७५ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — देहातमा संवादको एउटा सार्वजनिक मञ्च हुने गर्छ ‘दलान,’ जसलाई मधेसमा बैठका, बहरघरा पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो थलो जहाँ घर बाहिर छरछिमेक, आफन्त, इष्टमित्रहरूसँंग गफ गरिन्छ । यहाँ उठ्ने गफहरूमार्फत ती लोक आहान पनि सुन्न पाइन्छन्, जो अब लोप भइसकेको मानिएको छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषणहरू पनि गजबले बुझ्न पाइन्छ । भुइँ सतहमा के कस्ता गुनासाका छालहरू उठ्दै गरेका छन्, तिनलाई पनि गम्न पाइन्छ । देहातमा हुने (फुनगी वर्ग) र नहुने (भुइयाँ वर्ग) बीचको दूरी बढदै जाँदा विस्तारै हुने वर्गको एउटा खुट्टा सहरमा छ, तर उसले गाउँलाई पनि पुरै छोडेको छैन । उता नहुने पनि कहाँ गाउँमै अल्झिएको छ ?
दलान संवादमा सुनियो, ‘दुर–दुर केहन छै सरकार, अपने बैसल मोज करै छै, लोक करै हाहाकार, दुर–दुर केहन छै सरकार ।’ अर्काले सुनाए, ‘पीसै अछि हमरा जमिनदार, सोखै अछि हमरा सुदवला ।’ तुकबन्दीमा अभिव्यक्त यी पंक्तिहरूमा देहात सुसाएको भेटिन्छ । शक्तिशाली संघीय सरकारप्रतिको असन्तोष त झल्कियो नै, गाउँ–देहातमा विद्यमान शोषणको चक्रबारे पनि दुखेसो पोखियो । देहातमा अन्यायका बहुआयामिक अभ्यास ज्युँदैछन् ।
देहातमा गुम्सिएको असहजतालाई व्यवस्थापन गर्न अझै कति कुर्नुपर्ने हो भन्ने सवाल टड्कारो रूपमा देखिएको छ । भुइयाँ र फुनगी बीचको अन्तरलाई सार्थक संघीयताको अभ्यासले मात्र कम गर्नसक्ने हो । संघीय सरकारले नेपालमा संघीयता प्रशासनिक सहजताका लागि नभएर आन्तरिक उपनिवेशवादको अन्त्यका लागि आवश्यक मानिएको हो भन्ने बुझ्न भने सकेको छैन ।
पर्वहरूले प्राणवायुको काम गर्छन् । पर्वहरू सम्बन्धित समाजको संस्कृतिलाई चियाउन आँखीझ्याल भई उपस्थित हुने गर्छन् । जीवनमा समरसता, सरसता र सौन्दर्यका सांस्कृतिक सचेतना बढाउनमा यिनले सघाउ पुर्‍याउँछन् । मधेसको लोकसंस्कृति अत्यन्त समृद्ध छ । अहिलेको मधेसी पहिचानभित्र कतिपय प्राचीन संस्कृतिहरूको संगम नियाल्न सकिन्छ । फागु त लोकपर्वै हो । गाउँहरूमा माघ शुक्ल पञ्चमीदेखि नै होली (फगुवा) गाउन सुरु भइहाल्छ ।
होली जहाँ एउटा खास दिन उत्सवका रूपमा मनाइन्छ, त्यहीँ यसको गायन महिनौँ चल्ने गर्छ । दलान यस्तै सामूहिक गायनको एउटा थलो बन्ने गर्छ । यसमा हारमोनियम, ढोलक, झाल, डम्फु आदि बाजागाजा बजाएर फगुवा गाइन्छ । रङ्ग र अविरसंँग आपसमा प्रेम र सद्भाव अभिव्यक्त गरिन्छ नै, यसको मूल पक्षचाहिँ सामूहिक गायन हो, जहाँ विभिन्न पुस्ता एक ठाउँमा भेलाई भई गाउने गर्छन् । मधेसमा होली मनाइने अघिल्लो राति होलिका दहन गरिन्छ, जसलाई संवत् जलाउने पनि भनिन्छ ।
फागुनमा फागु गीतको धुन गुञ्जिन्छ भने चैतमा चैतीको । यस क्षेत्रका कर्णप्रिय फागु गीतले लोकजीवनलाई साहित्यको मुख्य धारासंँग जोड्ने गरेका छन् । लोकगीतको लोकसंगीतसँंग अभिन्न सम्बन्ध रहन्छ । प्रत्येक लोकगीतमा कुनै न कुनै वाद्यको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ ।
वाद्ययन्त्र उपलब्ध नभएका बेला चुटकी बजाएर वा ताली दिएर संगीत उत्पन्न गरिन्छ । फागु गीतमा आशिर्वाद र शुभेच्छाको तत्त्व पनि मौजुद छ । दलान–दलान पुगी गाउँलेहरू आपसमा सुखको कामना साट्दै गाउँथे— ‘सदा आनन्द रहै यही द्वारै, मोहन खेलै फाग ।’ मधेसी संस्कृतिको यो तत्त्व गाउँबाट पनि टाढिँदै गएको छ । देहातले लोकसंस्कृतिबाट आफूलाई विस्तारै अछुतो राख्न थालेको छ ।
मंगल पर्वको आमन्त्रणमा होली गाई आफन्तहरू आपसमा आनन्दको प्रकटीकरण गर्छन् । अब त्यस्ता कुरा कथामै सीमित हुनथालेका छन् । पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई पहिलाको फागु वा सघन मधेसी क्षेत्रमा पहाडी समुदायको बसोबास हुँदाखेरिको समावेशी होलीको बयान गर्छन् । अब त त्यसको ठाउँमा भोजपुरी र हिन्दीका सस्ता फागु गीत घन्किन्छन् । पारम्परिक होली गीतको आफ्नै स्वभाव थियो । त्यसमा यौवनको चर्चा थियो, कामको चर्चा थियो, तर मर्यादा पनि थियो । फागु आउँदै गर्दा किसानका घर–घरमा धनधान्य भित्रिसकेको हुन्छ ।
गहुँ पनि पाक्दै गर्दा किसानको बोझ हल्का भइसकेको हुन्छ । जाडोले विस्तारै विदा लिनथालेको हुन्छ । यस्तोमा फगुआ अर्थात मस्ती र बेफिक्री, उमंग र उल्लासको गीत ! यस्तोमा लोकबाजाहरूका साथ जब सामूहिक रूपमा होली गाइन्थ्यो, तब त्यसको आनन्दमा सबै मानिस विभोर हुन्थे । होली सुन्ने सबैलाई नयाँ जोश र उमंगले तरंगित गर्थ्यो । तर यतिखेरका चल्ती गीतमा तरुणाइको बखान गर्ने नाममा अत्यन्त हलुका र उत्तेजक गीत गुञ्जिन थालेका छन्, जसले होली गीतलाई भद्दा बनाइदिएका छन् ।
मधेसमा आज फागु मनाइँदैछ । मधेसमा यो पर्व पहाडी र मधेसी समुदाय गरी दुई दिन मनाइने गरिन्छ । यो होली प्रितीको पर्व हो, सौहार्द र सद्भावनाको पर्व हो । उत्साह र उमंगको पर्व हो । जुन पर्वको सम्झना मात्रले कण–कणमा बिजुलीको स्पन्दन हुन जान्छ, नसा–नसामा लालसाको लहर फैलिन जान्छ, मन–प्राणमा भावहरूको सम्मोहक इन्द्रेणी स्पर्श गर्न थाल्छ, त्यो पर्व नै होली ।
मोजमस्ती, रंगिनी र अलमस्तीको अत्यन्त सुन्दर सम्झना हो– होली । जनजनलाई जोडने र वर्षभरिका कटुतालाई बिर्साउने तथा आफन्तलाई अंँगालोबद्ध गराउने पर्व हो– होली । होलीका दिन गाउँका सबै मानिस ग्रामदेवताको परिसरमा उपस्थित भई त्यहाँ सबैभन्दा पहिला अविर अर्पण गर्थे, होली गाउँदै त्यहीँबाट फागु पर्वको उल्लासपूर्ण सुरुवात गर्थे र गाउँभरि धनी–गरिब सबैका घरदैलोमा पुग्थे ।
यतिखेर विस्तारै ती परम्पराहरू मेटिँदैछन् । सम्पूर्ण समाजलाई जोडने, एक ठाउँमा ल्याउने जुन प्रक्रिया थियो, त्यसमा विराम लाग्दै गएको छ । यसले गर्दा फागु पर्वको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्दै गएको छ । अब त जाति र पार्टी आधारित पर्व मनाउने काम हुनथालेको छ । सामुदायिक सम्वादको त्यो पुरानो माध्यम हराउन पो थाल्यो !
फागुसंँग जोडिएका पुराना तर असल परम्पराहरू हराउँदै जानु भनेको दुःखान्त अवस्था हो । यस्तो किन भयो त ? यतिखेर गाउँ–देहातमा चल्ने गफहरूको मूल विषय के हुन्छ ? मौसमले तात्दै गरेको मधेसमा ज्ञानेन्द्र शाह पगडण्डीहरू नाप्दै पूजाअर्चनामार्फत शक्ति साधनामा देखिए । उता मधेसलाई आधार बनाएको पृथकतावादी आन्दोलनको आरोह–अवरोह र हिंसाको राजनीतिमा लागेका चन्द समूहमाथिको सरकारी प्रतिबन्धले विशेष चर्चा पाएको छ ।
देहातमा जेजति दलान बाँचेका छन्, त्यहाँ यदि गफ हुन्छ भने यिनै राजनीतिका बहुआयामिक पक्षहरूबारे, तर कहीँ कतै मधेसमा हुँदै गरेको सांस्कृतिक विचलनबारे मन्थन हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न संगठनमार्फत फागुको अवसरमा साहित्यिक कार्यक्रम, मिलन समारोह जस्ता कार्यत्रमहरूको आयतन फराकिलो हुँदै गरे पनि परम्परामाथि जुन पूर्णविराम लाग्दै गरेको छ, त्यसले निम्त्याएको शून्यताबारे कहीँ कतै संवेदनशीलता भेटिँदैन । लाग्छ— देहातमा अनौठो के हो र स्वाभाविक के हो, छुट्याउने गाह्रो पर्दै गएको छ ।
के फागु पर्वका मूल तत्त्वहरू ओझेल पर्दै जानुको कारण गाउँहरू रित्तिँदै जानु हो ? मधेसका गाउँ ठूलो संख्यामा कुरुवाघरको रूपमा विकसित हुँदै गएका छन् । विगतमा रोजगारी वा द्वन्द्वका कारण गाउँलेहरूको पलायन भयो, त्यसमा जातीय संगठन र दलहरूको दाउपेचले गर्दा गाउँहरू विभाजित भए । कृषि माथिको निर्भरतामा आउँदै गरेको ह्रासले पनि यो परम्पराहरूलाई बिर्साउँदै लग्यो । बरु पर्वलाई बजारले कब्जा गरेको छ । फागु रङ्गको पर्व पनि हो ।
सामाजिक विविधतालाई बहुरङ्गले प्रस्ट्याउँथ्यो । रङ्ग पिचकारीमार्फत हालिन्छ । त्यस अर्थमा एउटा कनक पिचकारी दलाल पुँजीवादीहरूको हातमा पुगेको छ । राजनीतिको सोझो सम्बन्ध भ्रष्टाचार र संरक्षणवादसंँग जोडिएको छ ।
सीके राउतसंँग गरिएको राजनीतिक सहमति नाटकीय थियो । यसको सही कसी कार्यान्वयन मात्र हुनसक्छ । दमित चाहनाहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गर्ने हो भने मधेसमा विद्यमान तरलतालाई सही ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ ।
‘सरकारको ब्रेक फेल भो’ भनेर रोइ–कराइ सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओली आत्तिने होइन, सच्चिने उपक्रम उपयुक्त हुन्छ । भुइँ सतहमा चिन्ता छ, चन्दलाई बल प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा कतै सैनिक मुख्यालय सुस्तरी प्रधानमन्त्री सचिवालयमाथि हावी नहोओस् । संघीय सरकारका यतिन्जेलका यावत कामकुरा यथास्थितिकै जोगाउने खालका छन् । परिवर्तनको हावाले राज्ययन्त्रको कुनै संरचनालाई लेसमात्र पनि छोएको छैन ।
उता अतिवादी नारा लिएर हिँडेकाहरू नागरिक सशक्तीकरणका काम खुद्रामसिना गर्ने र गफैमात्रै ठूला गर्नेहरूसंँग भुइँ मान्छेहरू हुनसम्म आजित भएका छन् । कुनै पनि प्रकारको अतिवाद व्यवस्थापनलाई विधिद्वारा शासन (रुल बाइ ल) को बाटोबाट होइन, विधिको शासन (रुल अफ ल) मार्फत खोजिनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राथमिक सर्त पनि यही हो ।
फागु पर्व संवाद र आत्मीयताको पर्व हो । एउटा कनकपिचकारी अहिले संघीय सरकारको हातमा छ । ओली–सत्तालाईभने आफ्नो औचित्य र निरन्तरता बाहेक अरु कुनैकुराको चिन्ता छैन ।
ट्विटर : @kishore_chandra
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:०५